Iyo huru yeinjiniya yekubatanidza Kubata ID mune bhatani remagetsi reiyo iPad Mhepo 4 | IPhone nhau
Iyo huru yeinjiniya yekubatanidza Kubata ID mune bhatani remagetsi reiyo iPad Mhepo 4
Ngirozi Gonzalez | | iPad Air, Noticias
Pachiitiko chemwedzi wapfuura Apple yakaparura zvigadzirwa zvitsva pakati peiyo iyo iPad Mhepo 4. Shanduko huru yeiyi renji yemapiritsi inowana zvitsva maererano nekugadzirwa uye Hardware. Imwe yeaya matsva kurambwa kweFace ID, kusiyana neiyo Pro shamwari. Pamusoro peiyo dhizaini nyowani iyo bhatani repamba rinonyangarika, kuzadzisa hombe skrini ine mashoma mafuremu. Chimwe chinhu chitsva ndicho chakatsanangurwa naApple se'chinhu chikuru '. Ndezve kusangana kweiyo Touch ID sensor mune bhatani remagetsi kumusoro, Isu tinokuudza iwe ins uye kubuda kweiri 'rakakura basa reinjiniya'.
Iyo hombe feat yekugadzirisazve Kubata ID pane iyo iPad Mhepo 4
Pane iyo podcast Uropi humwe inotungamirwa naJustine naJenna vakave nerukudzo rwekubvunzurudza John Ternus naBob Borchers. Wekare ndiye mutevedzeri wemutungamiri weinjiniya yeApple kuApple. Nepo wechipiri, Borchers, akabata mutevedzeri wemutungamiri wekushambadzira kwechigadzirwa zvakare muapuro hombe. Muchikamu chose chavanotaura nezvacho 'gore reIpad', nhau dzeiyo iPad Air 4 uye yechisere chizvarwa cheiyo iPad yakatangwa munaGunyana apfuura.
(Pamusoro pekuwedzera Bata ID kubhatani repamba). Icho chinoshamisa feat yeinjiniya kuzadzisa iyo yeminwe yekunzwa neese kugona uye kuchengeteka mune fomati nyowani.
La Bata ID kusanganisa mubhatani remagetsi inobvumidza iyo iPad Air 4 kutaura zvakanaka kune bhatani reKumba uye nekugamuchira dhizaini zvakada kufanana nePro renji. Zvisinei, kuseri kwetekinoroji iyi kune mamirioni emadhora akaiswa mukutsvagisa nekusimudzira. Kuti zvinhu zvese zvishande zvakakwana: tora wakachengeteka uye unoshanda wemunwe kiinura nechidiki chakabudiswa zvigunwe.
John Ternus akataura nezve podcast kuti chinhu chakaomarara ndechekuwana mufananidzo wakazara weminwe uye nekukwanisa kuvhura chishandiso nechikamu chidiki cheichi chigunwe chemunwe, chinova chidimbu chefingerprint inoenderana pabhatani remagetsi. Uye zvakare, rimwe dambudziko iro mainjiniya eApple vakasangana naro ndere kupindira pakati pezvinhu zviviri zvakakosha: iyo isina waya kanyanga yePads inotsigira nharembozha uye iyo yekubata ID sensor:
Dambudziko raive rekutora ino bata inonzwisisika yekubata ID yekunzwa muiyo antenna isinganzwisisike, uye isu taifanirwa kufunga kuti tingavaita sei kuti vashande pamwe chete uye kuvadzivirira kubva "kutaura" kune mumwe nemumwe zvichikanganisa kupokana.
Mhedzisiro mhedzisiro inopfuura inogutsa, kuwana a nyowani iPad Mhepo 4 mutengo waro unotanga kubva pa649 euros uine zvakatemwa zvakakwana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Iyo huru yeinjiniya yekubatanidza Kubata ID mune bhatani remagetsi reiyo iPad Mhepo 4
Huya pamusoro paEngel González…. izvo vatove nazvo muAndorid anopfuura makore «mashanu emakore»….
… Basa reinjiniya… wadii kushandura kanyanga kana bhatani renzvimbo?
Ngirozi Gonzalez akadaro
Mhoro. Haasi mazwi angu, sezvauri kuona. Kambani imwe neimwe inogona kuona zvayinofunga nezvekufambira mberi kwayo uye vaviri ava vatevedzeri vemutungamiri vanoiona seyekuita muinjiniya, ini handisi kuiumba.
Pindura kuna Ángel González
Aya ndiwo mashandiro eIOS 14's Kurara Mode
Iyo yakasviba nzira yeGoogle hofisi kunyorera pakupedzisira kuwanikwa